Sebenzisa i-Messenger ngaphandle kokufaka nantoni na kwikhompyuter yakho nge-MSN Web Messenger | Iindaba zeGajethi
Uyakwaye ungathanda ukusebenzisa uMthunywa ngaphandle kokufaka nantoni na kwikhompyuter yakho? Inokwenzeka kuwe ngamanye amaxesha ukuba usemsebenzini okanye usekhaya lelungu losapho okanye lomhlobo ngubani ayifakwanga uMthunywa kwaye kufuneka uyisebenzise ngalo mzuzu kanye. Isisombululo esiqhelekileyo iya kuba ukufaka inkqubo, emva kwayo yonke loo nto kuya kuthatha imizuzu embalwa ukuyenza, kodwa ukuba umnini wekhompyuter akakuvumeli ukuba ufake nantoni na okanye usemsebenzini kwaye awunayo imvume yifake, esi sisombululo asisombululi ingxaki yakho.
Lkwesinye isisombululo, esingaziwa ngumntu wonke Sebenzisa i-Messenger ngaphandle kokufaka nantoni na kwikhompyuter yakho kwaye usebenzisa ngokulula isikhangeli sakho sewebhu. Oku kunokwenzeka ngenxa Umthunywa wewebhu evumela ukuba usebenzise uMthunywa ngokungena kwi-akhawunti yakho ye-Hotmail okanye ye-MSN kuyo nayiphi na ikhompyutha enonxibelelwano lwe-Intanethi ngaphandle kokufaka nantoni na.
APhambi kokuqhubeka kuya kufuneka uyazi ukuba ungomnye wabo bakhalaza malunga nendlela ecothisa ngayo inguqulelo yeMthunywa, Windows Live Messenger, ngekhe uyithande inguqulelo yewebhu yoMyalezo. Kucotha kancinci kunokuba usebenzisa i-Messenger kwinkqubo efakwe kwikhompyuter yakho, kodwa sisisombululo sokukwazi ukusebenzisa i-Messenger ngaphandle kokufaka nantoni na kwi-PC yakho, ke ukuba awunangxaki nokuhamba kancinci kancinci masiqale ngokufundisa.
1) Yiya kwiphepha Umthunywa weWebhu weMSN. Xa ulapho unamathuba onke eposta enjengale ibonwe kumfanekiso olandelayo. Ukuba ipowusta ayiveli, yiya ngqo kwinqanaba 4.
Ipowusta yesaziso ikwazisa ukuba usebenzise Umthunywa wewebhuIsikhangeli sewebhu (esihlala siyiFirefox okanye isiKhangeli seIntanethi) kufuneka sixhase iiwindows ezivelelayo. Oku kuthetha ukuba ufake isoftware ethintela iintengiso ezicaphukisayo ezivulekileyo ngequbuliso (ezivelelayo iwindow) phambi kwefestile yakho kodwa zikwathintela ukusetyenziswa kwe Umthunywa wewebhu kufuneka uvule iwindow pop-up.
2) Kuya kufuneka ukhubaze i-pop-up blocker ukuze usebenzise iWeb Messenger kwaye oku kwenziwa ngeendlela ezahlukeneyo kuxhomekeke kwisikhangeli osisebenzisayo. Ezona zisetyenziswa kakhulu yiFirefox kunye neInternet Explorer, Ndisebenzisa iFirefox kwaye yiyo loo nto ndiza kuchaza ukuba ungayenza njani ngale bhrawuza. Kunzima ngakumbi ukuyenza nge-Intanethi Explorer kuba kwinguqulelo yayo yangoku kuya kufuneka ucime iibhloksi ezimbini ezahlukeneyo. Ukuba usebenzisa i-Internet Explorer switch kwiFirefox kwaye uya kuhamba ngcono. Ungayikhuphela kwaye uyifake simahla ngokunqakraza kwikhonkco elilandelayo:
3) Sithathile ukuba sele ufake iFirefox, masibone ukuba kulula kangakanani ukungavuli ii-pop-up windows ngale bhrawuza. Qaphela ukuba xa uzama ukungena kwi-Messenger yeWebhu kuvela ibha etyheli ethi Msgstr "IFirefox ithintele le ndawo ekuvuleni i window ezivelelayo".
Ngoku qaphela ukuba ngasekunene kwaloo bar kukho iqhosha elibizwa ngokuba yi "Khetha". Cofa kuyo kwaye kwimenyu ehlayo ebonakalayo ukhethe ukhetho "Vumela izinto ezivelelayo ze webmessenger.msn.com" ngokucofa kuyo.
Njengoko i-pop-ups ingasekho ngxaki, ungaqala ukusebenzisa Umthunywa wewebhu.
4) Ngoku ukuba uphawu lwesilumkiso (okanye isaziso) alusabonakali, cofa kwiqhosha eliluhlaza elithi "Qalisa i-MSN Web Messenger" Kwaye khumbula ukuba ungangena ungene kwi-Intanethi, kude, njl, ngokukhetha imeko yakho yokuqalisa ebaleni ngaphezulu kweqhosha eliluhlaza.
5) Emva koko bhala imeyile yakho kunye negama lokugqitha kwiwindow ebonakalayo kodwa khumbula ukujonga ibhokisi "Soloko ubuza idilesi yemeyile kunye negama lokugqitha" ukuba usebenzisa ikhompyuter yoluntu okanye esetyenziswa ngabantu abaninzi ekhayeni lakho. Ngale ndlela uya kuthintela ukuba banako be izitshixo zakho yoMthunywa.
Pyiyo ke leyo. Ngoku ungasebenzisa uMthunywa ngaphandle kokufaka nantoni na kwaye ukhumbule ukucofa kuyo "Phuma" xa ugqibile ukusebenzisa uMthunywa njengokhuseleko ukuze kungabikho mntu unokuzenza umntu kwiNet. yonke imihla kuzalwa i-dupe kwaye AKUFANELE ube ngomnye wabo. Imibuliso yeVinegary.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Sebenzisa i-Messenger ngaphandle kokufaka nantoni na kwikhompyuter yakho nge-MSN Web Messenger
enkosi ngobukho bakho
Indoda endala enkosi kakhulu ndikholelwe ukuba ndichithe ixesha ndikhangela i-msn ye-linux ngethamsanqa ndifumene ulwazi lwakho enkosi kakhulu ...
Wamkelekile, inyani kukuba khange ndiyicinge malunga nendlela eluncedo ngayo le ndlela kubasebenzisi beLinux. Konke okugqibelele.
jonga ... Ndifuna i-msn ehambele phambili ... ayisiyiyo loo nto ishukumayo kunye nento engenakusebenziseka ... kwaye ayithathi imizuzu engama-30 ukudibanisa, oko kukuthi, i-1000 yeefestile ezivulekileyo ukuze ukwazi ukudibanisa ... ndifuna into ehambele phambili! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ndiyabulela kuwe, xhego, ungumphathi, undincedile nge msn web messenger, bendingazi ngobukho bayo.
Amagama omnxeba we Jennifer sitsho
ENKOSI NGOKWENZA… Q BIENNNN… .ANDIKWAZI UKUSEBENZISA I-MSN PQ ANDIZI UKUBA INDLELA YOKUQHUTYWA KWAM I-PC YAM ANDIYIVUMELI NDIYENZE…
KODWA NGONCEDO LWAKHO UNGAPHAKATHI NDISELE NDINOKUFIKELELA KULOKHU NGOKUGQIBELA KWI-WEBHU Ye-MSN ... NGOKUQINISEKILEYO I-10 YAKHO ...
Vumela okuzivelelayo kusebenze kakuhle, kodwa andikakwazi ukusebenzisa i-msn, kuba ndiyifumana le:
Umyalezo wokufikelela kwinethiwekhi: Iphepha alinakuboniswa
Ingcaciso: Kukho ingxaki kwiphepha ozama ukufikelela kulo kwaye alinakuboniswa.
Zama oku kulandelayo:
* Hlaziya iphepha: Khangela iphepha kwakhona ngokunqakraza i Qalela iqhosha. Ixesha lokuphuma lisenokwenzeka ngenxa yokuxinana kwe-Intanethi.
* Jonga upelo: Jonga ukuba uyichwethezile ngokufanelekileyo idilesi yephepha leWebhu. Idilesi inokuba ichwethezwe ngendlela engeyiyo.
* Ukufikelela kwikhonkco: Ukuba kukho ikhonkco kwiphepha olikhangelayo, zama ukufikelela kwiphepha elivela kwikhonkco.
Ukuba awukwazi ukujonga iphepha eliceliweyo, zama ukunxibelelana nomlawuli wakho okanye idesika yoncedo.
Ulwazi loBugcisa (kubasebenzi benkxaso)
* Ikhowudi yempazamo: Impazamo yommeleli eyi-502. Umncedisi we-ISA ukhanyele i-Uniform Resource Locator (URL) echaziweyo. (12202)
Idilesi ye-IP: 192.168.10.9
* Umhla: 12/9/2007 2: 42: 34 AM [GMT]
* Umncedisi: isa.dinosaurio.com.ar
Ndingenza ntoni, enkosi ...
Andiqinisekanga ngenene uMax, kodwa kubonakala ngathi uqhagamshelo lwakho lwenziwa ngeProxy (iseva ephakathi) kwaye oku kuthintela uqhagamshelo lwakho. Mhlawumbi ingxaki kuqhagamshelo lwakho, yeyiphi inkampani ongene kwisivumelwano nayo?
Ewe, andinabuganga bokukuqinisekisa, kodwa ndicinga ukuba amazwe ayahlonitshwa kwaye ukuba awudibani, iya kubonakala.
Molo, ukuba ndinxibelelana nomnxibelelanisi wewebhu ndikwimeko engadibananga, uya kubona oonxibelelwano endinxibelelana nabo. Enkosi, ndisemsebenzini kwaye bendingathanda ukuba ubone ukuba ndidityanisiwe
Molo Vinagre ,,, bendifuna nje ukukubuza ukuba unalo ulwazi malunga neapile kunye nenkqubo yayo yokwenza uqhagamshelo lwe-intanethi, kuba amagcisa afake i-intanethi ekhaya awanalo ulwazi kwaye awazi ukuba angawenza njani , bayenze kuphela ngenkqubo yokusebenza kweewindows kwilaptop yam…. naziphi na iingcebiso enkosi kakhulu ngoqwalaselo lwakho ...
Molo NDIFUNA UKWAZI UKUBA INGABE INABO INGOZI OKANYE INTO ENGAKWAZI UKUBA LE VERSION K IBONAKALA KWI-MSN YeYONA NGOKU
@anuska abazukuyibona ngaphandle kokuba bayazi ubuchule endingabaziyo.
@Marcela ndiyaxolisa ukukuxelela ukuba andikaze ndisebenzise iApple kwaye andinakukunceda.
@Carolina khange ndiwuqonde kakuhle umbuzo wakho kodwa ukuba uthetha ukuba eli phepha labaphathi bewebhu lithembekile, qiniseka ukuba lithembekile, kodwa baninzi abanye abangalumkanga.
Molo, andiyifumani loo bha imthubi uthetha ngayo
I-firefox ithintele le ndawo ekuvuleni iifestile ezivelelayo,…. Andiziboni iindlela zokukhetha,….
Ndikumamele kwaye ndikhuphele apho ubeka khona i-firefox,…. Kwaye sele ndikuxelele ukuba andiyiboni, naphina xa ufuna ukuvula iifestile ezivelelayo.
Kwaye ukuba xa ndingena kwi-webmessenger ndifumana unxantathu omthubi, isilumkiso, ndicinga ukuba, kwaye iyandixelela:
I-pop-up blocker ifunyenwe.
Ukuze usebenzise uMthunywa weWebhu, isikhangeli sakho sewebhu kufuneka sixhase ii-pop-up windows. Ngolwazi malunga nokuba ubaxhasa njani, jonga imiyalelo yesoftware yakho yokuvimba isoftware.
I-MSN Web Messenger ayifumaneki ngeli xesha. Zama kwakhona kamva.
Isikhangeli sakho sewebhu asihambelani nale nguqulo ye-MSN Web Messenger.
INTO ENDIYENZAYO?????????? UNGANDIPHENDULA KWI-EMAIL ENKOSI,…. UKUDLA KUNCINANE
URakel andinalwazi, ndiye ndajonga ukuba andifumani nto kwaye andinanto. Uxolo.
natyy ... sitsho
Ndizama ukunxibelelana nomthunywa nge-messenger yewebhu kodwa xa ndingena kwiphepha alindivumeli ndinike i-ckic apho ithi Qalisa iseshoni ye-web messenger .. nokuba ndingayinika kangakanani, ayindivumeli kunye nephepha ayilayishi i-100%, iya kuvalwa nayinkampani endisebenza kuyo. Ukuba ukhona umntu onokundinceda enkosi kakhulu ..
UJoselu Cuenca sitsho
Enkosi Vinegar, oku kuyandoyikisa.
Ngendlela, xelela uJazmin ukuba ukuba ufuna into ebhetele ukufaka umthunywa oqhelekileyo kwaye ukuba akafowuneli.
ho… !! Apha khange kundisebenzele = Ewe hayi kuba ukuba ndilandele onke amanyathelo = Ewe
Andiyifumani aah ¬¬
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba umthunywa wewebhu ukhuselekile na ukuba angaqhekeza inkqubo yomthunywa?
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba angayifumana ip yam ngokusebenzisa isithunywa sewebhu njengoko kusenziwa kumthunywa?
Ndikhangela i-intanethi kodwa andifumani nto, ngaba umntu angandixelela?
UJorge andicingi ukuba banokuyifumana i-ip yakho kwiWebmessenger.
PEPE LUIS sitsho
ENKOSI NGOKUSINIKELA ISIKHOKELO SOKUNGENELA EMNN NGAPHANDLE KOKUFAKA NTONI KUM KUNE NDIKHONZA KUNINZI EJEJEJEJEJEJE
KUPHELA UKUBA SIYABULELA NGENKCAZELO NOKUBA UYAZI UKUBA NAKUBA ASINGABO BAHLOBO, QINISEKA UKUBA NDIHAMBELE KUWE UKUZE UNIKE INTO YOLWAZI LWAKHO UYAZI UKUBA NDIYAKUTHANDA NGENXA YOKUBA UNABANTU
mmm hayi io andinokwazi ukuyenza xa umntu enokundinceda
Enkosi, ndiyayixabisa kakhulu !!!
molo, le nkqubo ilungile kwiifestile kwaye kwi-mac ayisebenzi, ndingenza ntoni? enkosi
Ukuba uthumela i-imeyile kumyalezo wewebhu ungafumana laip efanayo?
Enkosi ngalo lonke olu lwazi, indincedile kakhulu
I-wue naa grax nayo yokuba i-qm isebenze kakhulu kodwa ndinengxaki encinci, andikwazi ukudibanisa, ndiyathetha ukuba ikwi "seshoni yokuqala" kodwa ungaxhumi kwezi yure ukuzama ukudibanisa! Kutheni izakuba njalo? Ungandixelela into endinokuyenza? Ahh kunye nomnye udibaniso, ndifake i-amsn kuba bendisazi ukuba ndiyikhuphele phi i-msn kwaye ekuqaleni yayilungile kodwa ngoku ayidibani, mora muxo uyayiqonda into malunga nale nkqubo? ¿
Ndilinde impendulo yakho!
ukuba ufuna ukuyithumela ngeposi!
Molo, andazi ukuba niyenze njani le nto, kodwa khange isebenze kum kwaye ndifuna ukunceda, ndifumana ibhokisi ngesiNgesi ethi iyandivimba kodwa ayindiniki nto ngaphandle kokurhoxisa… ndenza ntoni ngoncedo enkosi?
Ngaphandle koMthunywa sitsho
inokusetyenziswa ngaphandle komthunywa
o kwenzekani sq kum emsebenzini wam bavimbe i-msn ngo
phakathi kwe-fireware kwaye ndifuna ukwazi ukuba ndiyakwazi na
yenza into ukuncokola okanye iphepha elithile
njengoko msnfx ayenzi c into enje ……… andikwazi ukuqhagamshela
nangawaphi na ala maphepha
Ndenzaoooooooo ndincedaaaaaaaaaaa ..
gabriela vnzla! sitsho
pzz la crap ew superrrrrr indala nangaphandle ndixhume x phaya! Kwaye andibonakali ngathi ndidityanisiwe !!
abahlobo bam e diceeeen! Ndiyathetha, yinto engekho mthethweni, enye into ehambele phambili, iPlis
uyyyyyyyyyyyyyyyyy yintoni endisindisileyo
kulungile kakhulu enkosi ngeyda
Molo emsebenzini wam iinkqubo sele zivimbile onke amaphepha ewebhu omthunywa (meebo, ebuddy, messenser fx, njl.) Sele ndizamile ngayo yonke into kodwa andikwazi ukunxibelelana, uyayazi enye indlela yokwenza ???
molo bto ndizamile nge-msn mobile zama kwaye undixelele izinto xao
Uviniga, ungubani? Ndicinga ukuba umntu uyinja elungileyo kuyo yonke le nto, ufunde njani kakhulu okanye ufunda ntoni?
UJosue ufunda okuninzi malunga nesayensi yeekhompyuter kwi-Intanethi kunye nokuziqhelanisa nekhompyuter.